Asan' ny Apôstôly : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Asan' ny Apôstôly : Fahasamihafan'ny versiona roa
Asan' ny Apôstôly (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Jiona 2018 à 16:42
48 octets ajoutés , il y a 3 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Jiona 2018 à 16:37 (hanova)
k (Namafa soratra tsy ilaina)
Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Jiona 2018 à 16:42 (hanova) (esory)
k (Nanova drafitra)
Ny '''''Asan'ny Apostoly''''' dia boky fahadimy ao amin'ny [[Testamenta Vaovao]]. ''Πράξεις των Αποστόλων'' (Prakseis tôn Apostolôn) ny anarany amin'ny teny grika. A''ctus Apostolorum'' kosa amin'ny teny latina. Ny ''Asan'ny Apostoly'' dia mitantara ny fiainan'ny fiangonana kristiana tany am-piandohana. Tohin'ny ''[[Filazantsara araka an'i Lioka]]'' izy. Teo anelanelanMitantara ny fanatanterahan'ireo Apostoly ny taonairaka 60nampanaovin'i [[Jesosy]] azy ireo hitory ny Vaovao mahafaly ao amin'ny [[Jiosy]] sy 100amin'ny nofirenena nanoratanajentilisa azy(Asa 1.8) Eoho anelanelanlasa zanak'Andriamanitra io boky io. Mitantara koa ny fifandirana nisy teo amin'ny Jiosy tsy kristiana sy ireo Kristiana ny amin'i Jesosy ny Asan'ny Apostoly (Asa 4.1-31; 7.1-59). Ny [[FilazantsaraFanahy Masina|Fanahin'Andriamanitra]] syno hitarika azy ireo hitory ny Vaovao mahafalin'i Jesosy amin'ny firenena rehetra. I [[EpistilyPaoly (apostoly)|Paoly]], izay tsy isan'ireo [[Apostoly roa ambin'ny folo]], no misytantaraina azyao amin'ny Asan'ny Apostoly fa nafana fo indrindra tamin'ny fitoriana ny Vaovao mahafaly taorian'ny niovany fo avy amin'ny [[Jodaisma|fivavahana jiosy]] ho amin'ny fanarahana an'i Kristy.
== Ny votoatinAnaran'ny boky ==
''Πράξεις των Αποστόλων'' (Prakseis tôn Apostolôn) ny anarany amin'ny teny grika. A''ctus Apostolorum'' kosa amin'ny teny latina.
Tohin'ny [[Filazantsara araka an'i Lioka]] ny Asan'ny Apostoly. Mitantara ny fanatanterahan'iro Apostoly ny iraka nampanaovin'i [[Jesosy]] azy ireo hitory ny Vaovao mahafaly ao amin'ny [[Jiosy]] sy amin'ny firenena jentilisa (Asa 1.8) ho lasa zanak'Andriamanitra io boky io. Mitantara koa ny fifandirana nisy teo amin'ny Jiosy tsy kristiana sy ireo Kristiana ny amin'i Jesosy ny Asan'ny Apostoly (Asa 4.1-31; 7.1-59). Ny [[Fanahy Masina|Fanahin'Andriamanitra]] no hitarika azy ireo hitory ny Vaovao mahafalin'i Jesosy amin'ny firenena rehetra. I [[Paoly (apostoly)|Paoly]], izay tsy isan'ireo [[Apostoly roa ambin'ny folo]], no tantaraina ao amin'ny Asan'ny Apostoly fa nafana fo indrindra tamin'ny fitoriana ny Vaovao mahafaly taorian'ny niovany fo avy amin'ny [[Jodaisma|fivavahana jiosy]] ho amin'ny fanarahana an'i Kristy.
Teo anelanelan'ny taona 60 sy 100 no nanoratana azy. Eo anelanelan'ireo [[Filazantsara]] sy ireo [[Epistily]] no misy azy. Ny nanoratra ny [[Filazantsara araka an'i Lioka]] ihany no nanoratra ny Asan'ny Apostoly.
== Fizaràn'ny boky ==
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/815978"